Sheekada filimka FryDay: Govinda oo shactiradiisa lasoo laabtay laakiin filim hadal heyn xoogan wato lama imaanin – Filimside.net
October 13, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: October 13, 2018
Filim hal guri lagu duubo sidoo kalena jah wareer iyo shactiradiisa wato wax ku cusub ma ahan Bollywood-ka waxaana marnaba la hilmaami karin Director Priyadarshan sida uu filimkii GARAM MASALA  u sameeyay asigoo intiisa badan sheeko ahaan hal guri ha reereesnaa.
Haatan Govinda ayaa la yimid filimka shactirada badan FRYDAY waxaana la wado atooraha shactirada looga haray Varun Sharma waana filim shactiro iyo jah wareer hal guri waxa ka dhacaayo ku saabsan.
Jilaasha filimka FryDay: Govinda, Varun Sharma, Digangna Suryavanshi, Brijendra Kala, Sanjay Mishra
Waqtiga uu soconaayo: 113-daqiiqo
Fariinta Filimkan Oo Kooban: FryDay waa filim ka hadlaayo jah wareerka ka dhacaayo hal aqal maalin Jimco ah. Waxaana xusid mudan in Rajiv Chhabra (Varun Sharma) uu u shaqeeyo shirkad biyaha nadiifiso laguna magacaabo Pavitra Paani Purifier wuxuuna u qaabilsan yahay dhanka iibka.
Laakiin Rajiv Chhabra (Varun Sharma) hadafkiisa ma gaarayo waayo saaxiibkiis ay shaqo wadaaga yihiin Sameer (Meghvrat Singh) ayaa dhanka iibka iyo suuq geynta kaga wanaagsan.
Sidaa darteed Rajiv Chhabra (Varun Sharma) oo shaqadiisa gaabis ka muuqato waxaa u wacaayo mudanihiisa una sheegayo maalin walbo oo Jimco ah inuu biyaha iibiyo ama suuq geeyo haddii kale shaqada laga racadeen doono.
Rajiv Chhabra (Varun Sharma) wuxuu la kulmaa ninka dadka qiirada galiyo Manchanda (Sanjay Mishra) kaasi oo u sheegayo ama siinayo fikrad ah inuu biyo nadiif ah u galiyo deegaanka uu degan yahay haweeneyda NGO-ga ka shaqeeyo ama hawlaha samafalka qaabilsan ee lagu magacaabo Bela (Prabhleen Sandhu).
Bela (Prabhleen Sandhu) waxay u dhaxdaa atooraha tiyaatarada filimada ku sameeyo Gagan Kapoor (Govinda),waana haweeney mashquul badan taasi oo sababtay inaysan waqti u heli karin seygeeda Gagan Kapoor (Govinda).
Sidaa darteed Gagan Kapoor (Govinda) wuxuu xiriir qarsoodi ah la yeelanayaa Bindu (Digangana Suryavanshi) waxaana qabo askariga lagu magacaabo Ranpal Dahiya (Rajesh Sharma).
Bela (Prabhleen Sandhu) waxay maalin Jimco ah aadeysaa magaalada Shimla halka seygeeda Gagan Kapoor (Govinda) uu dajinaayo qorshe ah inuu Bindu (Digangana Suryavanshi) gurigiisa ku balansado marka ay xaaskiisa safar shaqo aado.
Dhinaca kale Bela (Prabhleen Sandhu) waxay waceysaa Rajiv Chhabra (Varun Sharma) si u biyo nadiif ah gurigeeda ugu galiyo maalinta Jimcada ah oo ay shaqo u aadeyso magaalada Shimla.
Subaxda Jimcada ah Bela (Prabhleen Sandhu) waxay safar u aadeysaa Shimla halka Rajiv Chhabra (Varun Sharma) uu si dhaqsi ah guriga Bela ku imaanayo sidoo kalena Bindu (Digangana Suryavanshi) ayaa isla guriga Bela imaaneyso madaama ay kulan qarsoodi ah la leedahay Bela seygeeda Gagan Kapoor (Govinda) kadibna jah wareer ayaa aqalka Bela ka dhici doono waana waxyaabaha loo daawan doono qaybaha dambe ee filimkan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimkan Shactirada Badan: QoraaRajiv Kau sheekadiisa waa mid sahlan sidoo kalena qof walbo fahmi karo sidoo kalena 113-daqiiqo uu filimkan soconaayo waa mid lagu raaxeesan karo mada daalo ahaan sidoo kalena Manurishi Chadha hadalada uu filimkan u diyaariyay waa kuwo heer sare ah.
Abhishek Dogra shaqo wacan ayuu qabtay wuxuuna horey u sameeyay filimkii shactirada badnaa DOLLY KI DOLI  waxaana muuqato inuu yahay filim sameeyo ku haboon sameynta aflaanta aflaanta shactirada jah wareerka leh ee aan laga xiiso dhigeyn daawashadooda.
Filimka FryDay halka saac hore caajis ayaa ka muuqdo balse halka saac dambe waa mid aan laga xiiso dhigeyn sidoo kalena mada daalo dhameestiran leh.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkan: Govinda waa soo laabtay weliba si heer sare ah ayuu filimkan kaga baxsaday qaab jiliin ahaan run ahaantii Govindi-hii aan naqiinay ee dadka mada daalin jiray ayaa soo laabtay weli daawadayaasha ruug cadaagan wuu ka qoslin karaa.
Varun Sharma waa jilaa ka sameesay qosol iyo shactiro isagana door adag ayuu filimkan ku leeyahay weliba waa arin xiiso badan sida isaga iyo Govinda iskula jaan qaadayaan filimkan dhanka mada daalada.
Digangana Suryavanshi waa gabbar qurux badan sidoo kalena doorkeeda ka baxsatay sidoo kalena Prabhleen Sandhu iyadana doorkeeda waa heer sare sheekadana xiiso gaar ah ayay u yeeshay bandhig ahaan.
Gunaanad: FryDay waa filim mada daalo dhameestiran leh sidoo kalena Govinda si qurux badan oo xasuus kugu reebeyso u sameeyay door ahaan laakiin nasiib daro filimkan hadal heyntiisa oo aad u hooseyso sidoo kalena xayeysiin balaaran looma sameynin waxayna midaas sababi doontaa in tiyaatarada daawadayaal badan uu kusoo jiidan waayo filimkan shactirada dhameestiran leh.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka FryDay ee Govinda ku xarakeeyay dhan walbo:
Waxaa Aqrisay 857